काठमाण्डौंमा मोटरसाइकल चालकको लागि ट्राफिकले ल्यायो नयाँ नियम, अब यस्तो कार्य गरे तुरुन्तै पक्राउ गर्ने ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाण्डौंमा मोटरसाइकल चालकको लागि ट्राफिकले ल्यायो नयाँ नियम, अब यस्तो कार्य गरे तुरुन्तै पक्राउ गर्ने !
काठमाण्डौंमा मोटरसाइकल चालकको लागि ट्राफिकले ल्यायो नयाँ नियम, अब यस्तो कार्य गरे तुरुन्तै पक्राउ गर्ने !
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मोटरसाइकलको लुकिङ ग्लास तोडमोड गर्ने या परिवर्तन गरेर राख्ने चालकलाई कारवाही थालेको छ । लुकिङ ग्लासको जथाभावी प्रयोग गर्ने, हटाउने तथा स्वरूप परिवर्तन गरेका कारण चालकले पछाडिको सवारी नदेख्दा दुर्घटना बढेको भन्दै महाशाखाले उक्त अभियान थालेको आज एक सूचना जारी गरी जनाएको छ ।
महानगरीय प्रहरी दिवस : ‘लगनशील भए घटनाको अनुसन्धानमा सफलता’
महानगरीय प्रहरी दिवस २०७६ का अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित समारोहमा उहाँले प्रहरी कर्मचारीले पूर्ण व्यावसायिकताका साथ जिम्मेवारी बहन गर्दै कार्यसम्पादन गरे नागरिकले सुरक्षाको पूर्ण अनुभूति प्राप्त गर्ने जिकिर गर्नुभयो ।